REPUBLICADAINIK | गाउँघरमा सजिलै पाइने अमलाका के–के छन् फाइदा ? - REPUBLICADAINIK
गाउँघरमा सजिलै पाइने अमलाका के–के छन् फाइदा ?
काठमाडौं । अमला प्रकृतिले निःशुल्क उपहार दिएको बहुगुणी फल हो । अमलामा प्रसस्त मात्रामा भिटामिन सी पाईन्छ ।
अमला खानाले आँखाको रोशनी बढ्नुका साथै बच्चाको झाडापखाला समेत निको पार्छ । आयुर्वेदिक दृष्टिकोणले पनि अमलाको अति नै महत्व छ । अमलामा रहेको तत्वले दिमाग तेज बनाउँछ । त्यसैगरी छालाको समस्याबाट दूर राख्छ । यसका अलावा अमलाको अन्य धेरै फाइदाहरु छन् ।
Published : Saturday, 2017 September 2, 11:14 am